Manentana ny taranaka vaovao miteny Bali amin’ny alàlan’ny superheroes sy wiki · Global Voices teny Malagasy
Fiteny ampiasain'ny olona 3,3 tapitrisa any Indonezia ny Bali
Voadika ny 20 Avrily 2021 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Português, bahasa Indonesia, Esperanto , English
Pikantsary avy amin'ny Transformasi Luh Ayu Manik Mas Trailer.
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka amin'ny 21-27 aprily 2021, Ni Nyoman Clara Listya Dewi no handray ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana aina ireo fiteny Aziatika. Vakio bebe kokoa momba ny fanentanana eto.
Nitana andraikitra lahibe tany Bali, Indonezia, tamin'ny alàlan'ny fanatontosana fomba maro samihafa hampiroboroboana ny kolontsaina sy ny fiteny Bali tamin'ny aterineto ny fikambanana BASABali. Ankoatra ny sehatra fianarana fiteny dia misy rakibolana an-tserasera amin'ny endrika wiki izay azon'ireo mpisera handraisana anjara na ahafahany miditra amin'ireo loharanom-pahalalana mifandraika amin'ny fiteny ao amin'ny famakiamboky virtoaly.
Ao amin'ny firenena manankarena fahasamihafana ara-pitenenana misy mponina maherin'ny 270 tapitrisa sy fiteny 707 mahery, eo amin'ny 3,3 tapitrisa eo ho eo ny olona miteny Bali. Matetika hita ao amin'ny nosy Bali ilay fiteny, toerana malaza mahasarika mpizaha tany manankarena vakoka ara-kolontsaina. Saingy latsa-danja ilay fiteny satria mampiasa ny fiteny ofisialin'ny firenena, Indoneziana ny ankamaroan'ny sekoly sy ny fampitam-baovao. Matetika hamafisina kokoa ny fianarana teny anglisy na ny fiteny iraisam-pirenena hafa noho ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny fizahantany. Na izany aza, noho ny tetikasa BASABali, mitombo hatrany ny fizarana ilay fiteny ao amin'ny tambajotra sosialy ary mitady tahala vaovao amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny haino aman-jery izany.
Iray amin'ireo tetikasa lohalaharana ny famoronana superhero nomerika iray antsoina hoe Luh Ayu Manik Mas. “Be herimpo, mailaka, kinga ary matanjaka ity superhero Indoneziana ity ary mampiasa ny heriny hanohanana ny tontolo voajanahary sy ara-kolontsaina any Indonezia.” Hita amin'ny fiteny Bali, Indoneziana, ary Anglisy ny tantarany an-tsary mba hisarihana olona maro kokoa mihoatra an'i Bali.
Nitafatafa tamin'ny Rising Voices tamin'ny alàlan'ny mailaka ny talen'ny fifandraisana ao amin'ny fikambanana, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, ary nanome fanazavana fanampiny momba ny anjara asany ao amin'ny BASABali sy ny antony maha-zava-dehibe ny fampidirana ny fitenin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana amin'ny alàlan'ireo sehatra nomerika ireo.
Sary natolotr'i Ni Nyoman Clara Listya Dewi, nahazoana alàlana.
Rising Voices (RV): Manao ahoana ny toerana misy ny fiteninao ivelan'ny aterineto ankehitriny, sy amin'ny aterineto ihany koa ?
Ni Nyoman Clara Listya Dewi (NNCLD): Matanjaka amin'izao fotoana izao ny Bali, tenindrazako, saingy atahorana ny ahavery azy io sahala amin'ireo fiteny ao an-toerana amin'ny tontolo nomerika maoderina; mampiasa teny Indoneziana sy Anglisy ny ankamaroan'ny tanora ankehitriny, indrindra amin'ny fifanakalozana an-tserasera toy ny tambajotra sosialy. Mbola maro ny olon-dehibe no mampiasa ny Bali amin'ny sehatry ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Zava-dehibe ho ahy sy ny tanora hafa any Bali ny manomboka mieritreritra ny fomba azo atao mba hitehirizana ny teny Bali na anatiny na ivelan'ny aterineto.
RV: Inona araka ny eritreritrao no fanamby lehibe atrehin'ny fitenin'ny vondrom-piarahamoninao raha miresaka serasera nomerika na famoronana votoaty nomerika amin'ny fitenindrazan'izy ireo ?
(NNCLD): Ny fidirana tsy mitovy amin'ny tontolo nomerika no olana lehibe indrindra eto aminay. Mitombo hatrany ny mpisera aterineto, saingy tsy ny faritra rehetra ao Bali no manana fifandraisana amin'ny aterineto raha ny tena marina. Izany dia [vokatry] ny olana maro toa ny loharano tsy mitovy, ny fari-pahaizana ambany sy ny saranga sosialy.
RV: Araka ny hevitrao, inona ny sasany amin'ireo dingana azo raisina handrisihana ny fitomboan'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto ?
(NNCLD): Manao fanentanana amin'ny fampitomboana ny fampiasana ny fiteny Bali amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny fandrisihana ny olona handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny wiki ara-kolontsaina an-tserasera ny BASAbali Wiki .
RV: Inona ny antony manosika anao voalohany hiasa hahita ny fiteninao sy ny kolontsaina mba ho vonona amin'ny aterineto ?
(NNCLD): Ny hiarovana ny fiteny sy ny kolontsaina Bali amin'ny hoavy ny antony voalohany manosika ahy. Tiako ny mba hahafantaran'ny taranaka fara mandimby ny fiaviany, ny kolontsain'izy ireo ary ilay fiteny mba [ho] ampiasaina sy hiorim-paka amin'ny fiainana Bali ao anatin'ny 20-50 taona manaraka.